सामान्य मद्यपान पनि मस्तिष्कका लागि खतराः अनुसन्धान
जेठ २९, २०७४ सोमवार १९:०३:००
केही अनुसन्धानले सन्तुलित/थोरै मद्यपानले स्वास्थ्य राम्रो हुने देखाएका छन्। कतिपय चिकित्सक एक ग्लास वाइन वा बियर सन्तुलित रात्री भोजन (डिनर) मा सामेल गर्न सल्लाह दिन्छन्। ‘मेडिटेरानियन डाइट’ र ‘ड्यास (डिएएसएच) डाइट’जस्ता सन्तुलित भोजनले मुटु र मस्तिष्क स्वस्थ राख्नुका साथै रक्...
जेठ २६, २०७४ शुक्रवार २०:५६:००
मानिसका तीनवटा आँखा हुन्छ्न् भनिन्छ। दुईवटाले दृश्य देख्ने काम गर्छन् भने बाँकी एउटा आँखा नदेखिने गरी निधारको बीच भागमा हुन्छ। जसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘थर्ड आइ’ भनिन्छ भने नेपालीमा ‘अग्नचक्र’। त्यही अग्नचक्र रहेको भागमा तेलको धारा निरन्तर खसाल्नुलाई नै &...
अन्डा कति स्वस्थकर ?
जेठ २०, २०७४ शनिवार १९:३४:५६
– अन्डामा पाइने प्रोटिनले मांसपेशी निर्माण र सुरक्षामा सघाउँछ भने सन्तुष्टि पनि बढाउँछ । – अन्डामा डाएटरी कोलेस्टेरोल उच्च र स्याचुरेटेड फ्याट थोरै मात्रामा पाइन्छ, जुन ब्लड कोलेस्टेरोलका लागि खराब मानिन्छ । अन्डा क...
जेठ १८, २०७४ बिहिवार २०:१७:४०
शिक्षा, व्यापार व्यवसाय, प्रविधिलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धाले हाम्रो जीवनशैली अत्यधिक तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा विश्वभर बर्सेनि मार्च २० मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसन्नता दिवस (इन्टरनेसनल ह्याप्पिनेस डे) मनाउने गरिएको छ । दैनिक तनावबाट केही मात्रामा भए पन...
सबैभन्दा सुरक्षित सनस्क्रिन क्रिम कसरी छान्ने ?
जेठ १२, २०७४ शुक्रवार २०:१५:४८
७३ प्रतिशत सनस्क्रिन तिनका विज्ञापनमा भनेजस्तो प्रभावकारी नहुने वा तिनमा खराब तत्व हुने सनस्क्रिनबारे बेलाबेला गरिएका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । एक वैज्ञानिक भन्छन्, ‘सनस्क्रिनका विज्ञापन भ्रामक छन् ।’ गर्मी लागेपछि उपभोक्ता घामका हानिकारक अल्ट्राभाइलेट किर...
जेठ ७, २०७४ आइतवार १५:०४:००
ग्याष्ट्रिक तथा पेटका रोगीहरुले योगाभ्यास गर्दा विस्तारै गर्नुपर्छ । योगाभ्यास नियमति रुपमा गर्दै जानुपर्छ । योग स्वच्छ हावा चल्ने हरियो चौर वा खुल्ला ठाउँमा गर्नु राम्रो मानिन्छ । योगका कुनै पनि अभ्यासलाई ६ देखि १० पटकसम्म दोहोर्‍याउनु पर्छ। पवनमुक्तासन यो आसन...
जेठ ४, २०७४ बिहिवार १९:००:००
सुन्दर देखिन को नचाहला र । तर, सुन्दर र चम्किलो छाला भन्नेवित्तिकै कहाँ बनाउन सकिन्छ र । अझ अनुहारमा आउने अत्याधिक डन्डीफोरले त अनुहारलाई कुरुप नै बनाइदिन्छ । सुन्दर मुहारलाई कुरुप बनाउने डन्डिफोरलाई सामान्य घरेलु उपायले पनि हटाउन सकिन्छ । डन्डीफोरबाट छुटकारा द...
१७ तस्विरमा हेर्नोस् पहिलो दक्षिण एसियाली योगा प्रतियोगिता
बैशाख २५, २०७४ मगलवार ०२:११:००
ललितपुर- मानिसलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा तन्दुरुस्त राख्न योगलाई उपयोगी मानिँदै आएको छ। योग जन्म अगावै गर्भमा रहँदा नै 'गर्भासन'बाट सुरु हुने योगविज्ञहरु बताउँछन्। शारीरिक सन्तुलन र मानिसक एकग्रताका लागि योग गर्ने चलन बढ्दो छ। नेपाल योग खेलकुद संघले योग...
चैत २६, २०७३ शनिवार १९:२१:१४
छोरीको मृत्युले शोकाकुल भएकी बेलायतकी एक महिला छोरीको अन्डामार्फत आफू गर्भवती हुन चाहान्छिन् । अर्थात छोरीको अन्डालाई प्रयोग गरी हजुरआमा बन्न चाहान्छिन् । के यस्तो गर्भ बोक्दा खतरा छैन त ? सामान्यतया युवतीहरुको तुलनामा वृद्ध महिलाहरु बच्चा जन्माउने दृष्टिकोणले उच्च खतरा...
गर्भधारण अगाडि पति–पत्नीले अपनाउनु पर्ने सतर्कता
चैत २५, २०७३ शुक्रवार १४:०३:००
गर्भधारण एउटा प्राकृतिक नियम हो । यो आदिम युगदेखि अनन्तदेखि चल्दै आएको प्रक्रिया हो । गर्भधारणभन्दा अगाडि आमाको स्वास्थ्य अवस्था, उमेर र शारीरिक तन्दुरुस्ती हेर्नु धेरै दृष्टिबाट उचित हुन्छ । महिलाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम छ भने सन्तान पाउनका लागि केही समय पर्खिनु नै राम्रो ह...
चैत २१, २०७३ सोमवार १२:४४:००
मानिसले निश्चय नै आफूलाई सधैँ स्वस्थ राख्न चाहन्छ । तर, जति कोसिस गरे पनि रोगले शरीरलाई छाड्ने होइन । कताबाट रोग आइलाग्छ पत्तै हुँदैन । स्वस्थ्य रहनका लागि मानिस बिहानबिहानै दौडिन्छन्, जिम लान्छन्, जिउ मर्काइमर्काई ‘डान्स’ गर्छन् तै पनि भनेजस्तो हुँदैन । एरोबिक...
चैत २०, २०७३ आइतवार २३:५१:५८
खाना घटाएर वजन घटाउने खोज्छन् धेरैले । तर, यो गलत तरिका हो । किनभने यसो गर्दा शरीरका लागि चाहिने न्युनतम तत्वको समेत अभाव हुने खतरा हुन्छ । वजन घटाउन खाएको (क्यालोरी)भन्दा शक्तिका रुपमा प्रयोग भएको (क्यालोरी) खानको मात्रा धेरै हुनुपर्छ । क्यालोरी बढी हुने भएकाले ...
चैत २०, २०७३ आइतवार २३:३७:४३
एजेन्सी – शरिरलाई उर्जा प्रदान गर्न उपर्युक्त खानेकुराको महत्व निकै हुन्छ । तर त्यो भन्दा महत्व कतिखेर के खानेकुरा खाने भन्नेमा हुन्छ । हामीले खाने खानाको निन्द्रासँग पनि गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । तसर्थ तपाईलाई दिउसै निन्द्राले झुमाएको छ वा बिहान अबेसम्म पनि ब्युझिन सक्नुभए...
पिसाव प्रणालीका चार समस्या
चैत १८, २०७३ शुक्रवार १७:४३:०७
मिर्गौला, पिसाबनली, पिसाबथैली, पुरुषमा प्रोष्टेड लगायतका अंगको कार्यलाई हामी पिसाव प्रणाली भनेर बुझिन्छ।मिर्गौलाले रगत शुद्धिकरणको काम गर्छ । त्यसक्रममा शरीरमा भएको ‘टक्सिक’ फाल्ने काम गर्छ । मिर्गौलामा मासु पलाउने समस्यालाई मिर्गौलाको क्यान्सर भन्छौं । यसलाई ...
चैत १७, २०७३ बिहिवार १३:४९:०७
स्वस्थ जीवनशैलीले प्राकृतिक रुपमा नै उच्च तहको उर्जा प्रदान गर्छ र फूर्तिलो बनाउँछ । यसैले स्वास्थ्यका लागि आफ्नो दैनिक जीवनशैली परिवर्तन गर्न कहिल्यै पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन । स्वस्थ जीवनशैलीका केही आधारहरु यी हुन् : १. निन्द्रा : निन्द्रा स्वस्थ जीवनशैलीको एउटा अभिन्न पाटो ...
धमनी र नसाकाे समस्याका कारण लाग्ने ६ रोग
चैत १२, २०७३ शनिवार १९:१२:००
कुनै व्यक्तिमा भास्कुलर सिस्टम (रक्तप्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका भएका धमनी र नसा) सम्बन्धी समस्या छ भने त्यसलाई भास्कुलर रोग भनिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा गरिने सर्जरीलाई भास्कुलर सर्जरी भनिन्छ । भास्कुलर सर्जरीका क्रममा धमनी र नसामा भएका क्षति र आएका समस्यालाई शल्यक्रियाका माध्यमबाट ...
चैत ५, २०७३ शनिवार १२:५३:००
स्वास्थ्यका लागि हिडाईंका धेरै फाइदा छन् । यो एरोबिक अभ्यास हो । टेनेसी विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा पनि नहिड्नेभन्दा हिड्नेको शरीरमा बोसो काम भएको पाइएको थियो । हिड्दा शरीरमा रगत जम्न पाउँदैंन र मुटु रोग पनि लाग्न पाउँदैंन । यसका फाइदा के–के छन् ? १...
तपाईको तौल कति हुनुपर्छ ?
फागुन २८, २०७३ आइतवार ०१:४४:००
स्वस्थ रहन सबैले आफ्नो तौलको जानकारी लिनुपर्छ । यो सजिलैसंग जान्न सकिन्छ । यसको सूत्र हो, आफ्नो उचाई (सेन्टिमिटर) मा १०० घटाउने । त्यसपछि आउने प्रतिफल नै आफ्नो वाञ्छित तौल हुन्छ । यो भनेको यदि आफ्नो उचाई १७० सेन्टिमिटर छ भने त्यसमा १०० घटाइदिनुहोस्, बाँकी ७० केजी तपा...
मोटोपन घटाउन अपनाउनुपर्ने ८ उपाय
फागुन २८, २०७३ शनिवार १९:१५:४६
शरीरको उचाइको अनुपातमा हुनुपर्ने औसत तौलभन्दा शारीरिक तौल बढी हुनुलाई मोटोपन भनिन्छ । मोटोपनबाट रोगहरु उत्पन्न हुन्छन् । मोटोपन घटाउन सकेको खण्डमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च रक्तकोलेस्टेरोल, हृदयघातजस्ता रोगहरुलाई कम गर्न सकिन्छ । मोटा व्यक्तिहरुले जीवनशैली परिवर्तन गर्दा...
फागुन २७, २०७३ शनिवार ०१:११:००
अनुहार चम्काउन सौन्दर्य प्रशाधनमा मानिसहरु हजारौं खर्च गर्छन् । व्युटी पार्लर धाउँछन्। तर कतिपय यस्ता सामाग्रीले कुरुप बनाएका थुप्रै उदाहरण पनि छन् । मापदण्ड भन्दा बढी केमिकल राखिएका सामाग्रीले रोगको शिकार पनि बनाएका छन्। तर साइडइफेक्ट नहुने र घरमै सहजै पाइने तरिका...